Appel သည်အောက်တိုဘာ ၃၀ ရက်တွင်ပွဲအသစ်တစ်ခုအတွက်ဖိတ်ကြားမှုများကိုပေးပို့ပြီးဖြစ်သည် ငါက Mac ပါ
ဘင်ဂိုကစား! အောက်တိုဘာ ၃၀ ရက်တွင် Apple သည် Keynote အသစ်အတွက်ဖိတ်ကြားမှုများကိုစတင်ခဲ့သည်
သီတင်းပတ်၏အစအ ဦး ၌ကျွန်ုပ်သည်ခန့်မှန်းချက်တစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ပြီး၎င်းသည်ပြည့်စုံခဲ့သည်။ အောက်တိုဘာ ၃၀ ရက်နေ့မှာအက်ပဲလ်ပွဲတော်အသစ်ကျင်းပမယ်။ အောက်တိုဘာ ၃၀ ရက်မှာကျင်းပမယ့်အဖြစ်အပျက်တစ်ခုအတွက်အက်ပဲလ်ဟာမီဒီယာတွေကိုဖိတ်ကြားမှုတွေကိုစတင်လိုက်ပြီ ၎င်းတွင် iPad Pro အသစ်များနှင့် Mac မော်ဒယ်များကိုပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းများပါဝင်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်။
ဖိတ်ကြားချက်အရအောက်တိုဘာ ၃၀ ရက် ၁၀ နာရီမနက် ၁၀ နာရီတွင်နယူးယောက်မြို့၌ကျင်းပမည်ဖြစ်သည်။ ဘရွတ်ကလင်ဂီတအကယ်ဒမီ၊ Howard Gilman Opera House မှာ။
အကြံပေးသောစာတိုစာသားနှင့်အတူ "ပြင်ဆင်မှုအတွက်နောက်ထပ်ရှိပါတယ်"အားလုံးကိုဖိတ်ကြားချက်တစ်ခုတည်းကိုလက်ခံရရှိခြင်းမရှိကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။ တွစ်တာပေါ်တွင်ဖိတ်ကြားချက်များမျှဝေထားသည့်ပုံများကဒီဇိုင်းအမျိုးမျိုးကိုအသုံးပြုသည် ပန်းသီးလိုဂိုသောဆောင်ပုဒ်အကြံပြုထားသည် ထိုအဖြစ်အပျက်၏အနုပညာနှင့်ဆက်စပ်သောနိုင်ပါတယ်။
ကွန်ရက်များစတင်လောင်ကျွမ်းသွားခြင်းဖြစ်သည်။ အက်ပဲလ်သည်အဖြစ်အပျက်အသစ်တစ်ခုကိုဆက်သွယ်သောအခါကောလဟလများကြီးထွားလာသည်။ အသစ်သော Apple Pencil ပါ ၀ င်သည့် iPad အသစ်တစ်ခုကိုတွေ့မြင်ရန်မျှော်လင့်ပါသည်။ ထိုဒီဇိုင်းများနှင့်ဖိတ်ကြားခံရလျှင်ကျွန်ုပ်တို့သွားမည်မှာရှင်းနေပါသည်။ တိုးတက်လာသော Apple Pencil ကိုတွေ့မြင်နိုင်ခြင်း၊
အကယ်၍ သင်ကအက်ပဲလ်အသစ်ကိုကြေငြာရန်စောင့်နေခဲ့လျှင် iPads အသစ်တစ်ခုကိုဝယ်ပြီးဝယ်နိုင်မည်၊ သို့မဟုတ် MacBook အသစ်များကိုမည်သူသိနိုင်သည်ဆိုလျှင်ထိုအချိန်ရောက်လာပြီ။ အောက်တိုဘာ ၃၀ ရက်တွင်နယူးယောက်ရှိဤအဖြစ်အပျက်သစ်တွင်သင့်ကိုတွေ့သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Apple » အတော်ကြာ » ဘင်ဂိုကစား! အောက်တိုဘာ ၃၀ ရက်တွင် Apple သည် Keynote အသစ်အတွက်ဖိတ်ကြားမှုများကိုစတင်ခဲ့သည်
Earth 3D ဖြင့်ရှုထောင့် ၃ ခုဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသော Atlas ကိုခံစားပါ